Mogadishu Journal » Paris Saint-Germain oo Neymar iska iibineysa
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay dib kaga fakireyso iibinta Neymar marka suuqa kala iibsigu dib u furmo bilowga Janaayo.
Mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil ayaan la hubin, wuxuuna ahaa wararkii ugu waa weynaa suuqii kala iibsiga xagaaga, iyadoo kooxdiisii ​​hore ee Barcelona si aad ah loola xiriirinayay inay dib ugu soo celineyso Camp Nou.
Real Madrid iyo Juventus ayaa sidoo kale lagu qiimeeyay inay kamid ahaayeen kooxaha xiiseynayay ciyaaryahanka adduunka ugu qaalisan, kaasoo doonaya inuu ka tago Paris ka dib markii ay isku dhaceen madaxda kooxda.
Ma jiro wax talaabo ah oo u yimid ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Yurub horaantii bishaan, laakiin Tuttosport ayaa warinaysa in agaasimaha PSG Leonardo uu qorsheynayo inuu Neymar suuqa dib ugu soo celiyo Janaayo 1.
Kooxda heysata horyaalka faransiiska ayaa la fahamsan yahay inay lacag rikoor ah ku dooneyso 27 sanno jirkaan, in kasta oo kooxaha xiiseynaya ay u baahan tahay inay qaabeeyaan heshiiskiisa.
Heshiisyo dhowr ah iyo lacag caddaan ah ayaa lasoo bandhigay intii lagu jiray bilowgii suuqa, laakiin Barcelona iyo Madrid ayaa laga yaabaa inay markale ogolaadaan tartan ay u galaan saxiixa Neymar bartahama xili ciyaareedka.